Goldbackback na-agwụ n'oge dị mkpirikpi bullish zaa. - Mụọ ahia 2
Goldbackback na-agwụ n'oge dị mkpirikpi bullish zaa.
Onye na-ede akwụkwọ By Orlando Gutierrez
Enweghị asịsa na Goldback azụ na-agwụ na obere okwu bullish zaa.
** ọlaedo **
Laa azụ na Jenụwarị 6th Gold mebiri na etiti okwu bullish system malitere na njedebe nke November 2020 na ngagharị 5 (-8%) na-agbada gburugburu 1800 larịị.
Ọnụahịa laghachila ugbu a na 50% ma ọ bụ 4% na-adịghị mma ịkwaga iji chegharịa ntọala gara aga gburugburu 1870 ọkwa.
ọkwa a dị mkpa n'ihi na ọ na-ejikọta na 1.618 nke ntụgharị BC na 1.272 nke ụkwụ ikpeazụ nke ala nke mgbagharị 5. Nke a bụ nnukwu obere oge bekee zubere.
Ọ bụrụ na ọnụahịa agbaji kwa ụbọchị kwa ụbọchị, anyị nwere ike ịhụ anụ ọhịa bea ka ọ na-agbapụta azụ iji nyochaghachi obere ihe dị larịị 1800. Ọ bụrụ na ọkwa a gbajiri, anyị nwere ike ịhụ ọkwa ọkọlọtọ bearish zuru ezu na gburugburu 1765
→ EUR / GBP Na-agbakwunye na 0.8800, Nleghachite Anya na Ọkwa 0.8821